Scotland Yard, ny lalao amin'ny herinandro ao amin'ny App Store | Vaovao IPhone
Scotland Yard dia iray amin'ireo fanampiana vaovao amin'ny App Store izay efa lasa lalao mandritra ny herinandro. Momba izany ny kinova nomerika an'ny lalao birao nahazo loka Noforonina 30 taona lasa izay fa nankafizin'ny olona an-tapitrisany maro.
Ny andraikitray ao Scotland Yard no ho hitanao ny misy an'i Mister X fa nanjavona tany London izy ary navelany ho toy ny famantarana fotsiny ny tapakila nampiasainy. Ny lalao dia hanolotra antsika ny fahazoana miditra amin'ny kiraron'ireo agents mitady an'i Mister X na ilay mpandositra.
Ireto ny Seho lehibe i Scotland Yard ho an'ny iPhone sy iPad:
Sehatry ny fiainana any Londona vaovao
Hamafana sary HD (miaraka amin'ny fanohanana iPad 3 Retina!)
Single Player Mode - Lalao eo an-toerana ho an'ny mpilalao iray ka hatramin'ny enina, ao anatin'izany ny mpilalao solosaina
Multiplayer mode: eo an-toerana, Wi-Fi / Bluetooth ary an-tserasera / Game Center, misy firesahana amin'ny feo!
Universal Apps (Game Center Multiplayer miaraka amin'ny fitaovana iPad sy iPhone)
Mora ampiasaina tutorial tutorial
Torolàlana tsotra ho an'ny vao manomboka na ho an'ny manam-pahaizana
Tsy misy na inona na inona hangonina na hitahiry!
Fialam-boly tsy misy farany miaraka amin'ny ankohonanao sy ny namanao!
Ankafizo ny Scotland Yard amin'ny fitaovan'ny iOS anao ary avelao ny kilalao Ravensburger amin'ny vidiny 3,99 euro:
Scotland Yard€ 4,99
Fampahalalana bebe kokoa - Lalao amin'ny herinandro ao amin'ny App Store
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » Scotland Yard, ny lalao amin'ny herinandro ao amin'ny App Store
Badoo, ny fampiharana amin'ny herinandro ao amin'ny App Store